Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday: Very hasina tanteraka ilay demokrasia
Inty sy nday: Very hasina tanteraka ilay demokrasia
Niainan’ny vahoaka Malagasy teto hatramin’ny Repoblika voalohany sy nandritra ny Repoblika faharoa ny jadona. Ny fijoroan’ny vahoaka nanilika izany tamin’ny hetsi-pirenena tamin’ny 1991 no nidiran’ny fiaraha-monina Malagasy tao anatin’ny rivotra ny demokrasia. Rehefa tafaverina teo amin’ny fitondrana indray ny Amiraly Ratsiraka tamin’ny 1997 ary nodimbiasan-dRavalomanana tamin’ny 2002 dia niverina niaina tao anatin’ny jadona indray ny vahoaka Malagasy. Ny hetsi-pirenena teto tamin’ny 2009 no nampisento ny maro indray fa hiaina ao anatin’ny rafitra demokratika indray ny vahoaka.
Tonga eo amin’ny fitondrana Rajaonarimampianina nanomboka tamin’ny 2014 dia io fa tafaverina tanteraka ao anatin’ny rafi-pitondrana jadona ny vahoaka.
Ireo hetsika rehetra nokasain’ny hery pôlitika sy firaisamonim-pirenena natao teto dia voasakana avokoa, ary hetrim-pamoretana mihitsy no ampiasain’ny mpitondra jadona manakana azy. Vao niarahantsika nahita tamin’ny zoma teo iny ny momba an’i Andry Rajoelina sy ny lanonana tokony natao tany Mahajanga. Tamin’ny taon-dasa dia niarahantsika teto nahita ny fanakanana ny fihaonambe nokasain’ny “Mitsangana ry Malagasy” natao teny amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina. Toraka izany koa ny nokasain’ny “DFp” (Dinika ho fanavotam-pirenena) notanterahina teo amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina ihany. Ny fampihorohoroana mihoa-pampana nafitsoky ny fitondram-panjakna tamin’ny mpitarika ny “Afp” (Antso ho amin’ny fanavotam-pirenena), dia i Faniry Razafimanatany raha nikasa hitarika hetsi-bahoaka teny amin’ny kianjan’ny 13 May izy. Tsy latsa-danja amin’izany ny fampihorohoroana ny tompon’andraiki-panjakana any amin’ny faritra raha vao mamela ny sokajin-kery pôlitika tsy manao tokim-panompoana ny fitondram-panjakana ka mihevitra na mikasa hamory vahoaka.
Ny fandrahonan’ny minisitra Rolly Mercia isanandro vaky ny mpanao gazety hoe “handraisana fepetra…” na ny fangejana ny haino amanjerim-panjakana ho tsy mahazo mamela ny hafa haneho hevitra, ny fandrarana ny mpanao gazetin’ny Rnm sy Tvm ho tsy mahazo mamoaka ny vaovao ankoatra ny an’ny Hvm sy ny mpiara-dia aminy.
Tsy misy afa-tsy ny hetsi-pirenena andraisan’ny vahoaka anjara ihany no vahaolana hamongorana izany jadona izany hatrany amin’ny fakany, sy ny sokajin’olona mpamboly sy mpikolokolo azy io.
Tsy efa fotoanan’izany ve izao? Indrindra fa miharo fampahantrana lalim-paka ny fiverenan’ny jadona amin’ny heriny ankehitriny?
Tsarovy mandrakariva fa tsy mbola nisy vahoaka resy teo amin’ny taniny na oviana na oviana ary na taiza na taiza ka samia mandinika dia mahaiza mandray fanapahan-kevitra amin’ny fotoana iombonana.